Nin Beesha Reer (Maxamed Muumin) Ah Oo Nin Dhebayaco Ah Baas Si Xun Ugu Goo-gooyey – Codka Qaranka Tanadland
Nin Beesha Reer (Maxamed Muumin) Ah Oo Nin Dhebayaco Ah Baas Si Xun Ugu Goo-gooyey Iyo Beesha Ninka Lagadiley Oo Loohanjabey.
Sidaad ogtihiin dagaalkii labada maalmood ee dhacay (01/09/2011 ilaa 02/09/2011) kedib, Ciidankii ay libintu raacday ee beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed, guulaha ay gaareen waxaa ka mid ahaa in ciidankii beesha Dhebayaco iyo midiidinkooda jebiyey mushaar loo qoray. Ciidanka mushaarka looqoray waxaa loobixiyey ciidanka birmadka. Ciidankaas waxaa madax looga dhigay nin cida MA ah oo reer (Maxamed Xassan) ah. Waxaana ciidankaas lagu fangareeyaa daqliga ka soo xerooda garoonka iyo ilaha kale ee magaalada Gaalkacyo.
Ciidanka waa dhexdeer ah ayaa waxaa lagu soodaray dhawr nin oo ah agoontii ay aabeyaashood iyo awooweyaashood horey u laayeen. Maalin dhexdeer ah ayaa waxaa isu-faanay nin (Reer Axmed) ah oo ciidanka birmadka ah, iyo nin dhebayaco ah kana soo jeeda jifada ugu badan ee beesha MA ay raga ka laysay tan iyo intii xasuuqa mahbarku bilowday, Jifadaas oo ah jifada (Reer Mahad). Ninka (Reer Axmed) ayaa ninka agoonka ah wuxuu ugu dhaartay inaysan beeshiisa nus-saac ku qaadanayn inay magaalada Gaalkacyo ay uga sifeeyaan. Ninkii agoonka ahaa ayaa markaas ilaaqtamay. Markaas ayaa ninkii reer (Maxamed Muumin) intuu qorigiisii uu la baxay uu ninkii mahbarka ahaa baas shabaqa ugadhigay.
Intaasi markii ay dhacday oo ay agoontu nin koodii aasteen, ayaa waxaa dhacday arin ay beelaha reer (Ugaas Cismaan) aad uga caroodeen. Arintaas oo ahayd in dhawr nin oo waxmagarato ahi ay u tageen beeshii ninka laga diley. Markii niman kaasi ay dhebayacadii u tageena la soo cayrshey oo lagu yiri “Hadaad wadahadal nagarabtaan ninkii ninka naga diley noo keena”.
Arintaan ayaa waxay noqotay arin fadeexad ah oo beesha reer (Maxamed Muumin) beelaha kale ee reer Cismaan-ka koonfureed ay ku dacaayadeeyaan. Maadaama aysan ahayn wax weligeed horay u dhacay in nin reer Tanadland ah oo dhebayaco diley, in la yiraahdo reerkii uu ka dhashay hanaloo keeno. Maalin dhaweyd magaalada Gaalkacyo waxaa ku shiray beesha reer (Maxamed Muumin). Shirkaas ergada beesha ee isugutimid waxay ku canbaareeyeen nimankii waxmagaratada ahaa ee agoonta mahbarka u tegey. Waxgaradkii beesha reer (Maxamed Muumin) ee shirka ka hadlay waxay isku raaceen in ninka reer Tanadland uu ka qiimobadanyahay 100 nin oo dhebayaco ah.
Waxay kaloo qireen in reer Tanadland aysan weligood nin kooda cidna u dhiibin, beesha reer (Maxmed Muumin) na aysan ahayn wax ka suurooba iyo wax laga filankaro arinkaasi. Shirka waxaa qudbad aad u qiimo badan oo loo riyaaqay ka jeediyey ninka ninka mahbarka ah diley. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa “Reer hoos’u-boy hoos ha ay u booyaan ama ha’ay isfalaan oo qar ha’ay iskatuuraan”. Rag badan oo beesha ahina waxay ku hanjabeen in hadii beesha Dhebayaco ay qaado wax talaabo ah, inay ka dhabayn doonaan hanjabaadii loogu hanjabey ninka la diley intaan la dilin.
Si kastaba ha ahaatee beesha ree MM ayaa waxay aaminsantahay in aan laga yaabin in beesha ninka lagadiley ay qaado waxa talaabo ah, maadaama ay tahay reer jilicsan oo har iyo habeen mudo dheer gamta lagu hayey. Aana looga baran in ay wax talaabo ah qaadaan xataa marka dhowr iyo toban nin laga laayo. Xataa waxaa jirtey in nin wadaad ah oo raxanweyn ah oo ay dileen jifada hada ninka laga diley, ay beesha (Muumin Aadan) nin ka dileen iyagoo ugu aaray ninkii Raxanweynka ahaa oo ay sheegeen in uu ahaa nin degaanka Tanadland degan.
Dagaalkii labada maalmoodna sidaad ogtihiin wuxuu ka dhashay nin beesha Raxanweyn ah oo lagu shirqoolay Dhebayaco oo lagu yiri soo doonta. Loogana laayey nimankii ninka Raxanweyn soo doonay oo ahaa 18 nin. Beesha shirqoolka fuliseyna waxay ahayd beesha (Reer Xasan Xuseen “Baarleexyo”), oo ka mid ah beel weynta reer (Maxamed Muumin). Sababta shirqoolka keentayna waxay ahayd qolada agoonta oo ka quustay marka rak laga laayo inay wax talaabo ah qaadaan.
Xiisaddan cusub ayaa waxay ku soo beegantay todobaad kedib mar wadada wadaagsin oo ay dhebayacadu ka go’een inay maraan. Iyaga oo goor habeen ah si dhuumasho ah gaari xamuul ah wadada ku marinaya looga qabsaday. Gaarigaas oo sidey qalab muhiim ah oo ah kuwa wadooyinka lagu dhiso. Gaariga xamuulka ah ragii watey dhegta ayaa dhiiga loo daray. Mideeda kale, gaariga xamuulka ah ragii dhacay ayaa la sheegay hada inay ku shaqaystaan oo u gobalka mudug ka shaqeeyo.
Si kastaba arintu ha ahaatee beesha Dhebayo oo ah beel la quusiyey oo an ku dhicin inay wax talaabo ah qaadaan, ayaa waxaa hubaal ah inaan sidaas lagu deyneyn oo sidii loo laynjirey loo layndoono todobaadyada soo socda. Oo si bareer ah looga ugaarsandoono galabeedka xaafada Israac.
Beesha dhebayaco sidii ay dagaalka uga ridey tuulada saaxo waxaa soo foodsaartay culays siyaasadeed iyo mid ciidan. Sidaad ogtihiin tuulada saaxo waxay geysey beessha dhebayaco waxay awood lahayd. Laakiin dagaalkii saaxo ceeb iyo halaag bay kala kulmeen, oo maxaysatada habar-majeerteen dagaalkii saaxo waa lagu jebiyey. Maxaysatada Habar-majeenteen ee hada ku go’doonsan tuulada saaxo, waxaa intooda badan laga keenay xaafadda (Horseed) ee magaalada Garoowe oo ah xaafadda mahbarku ay ka deganyihiin Garoowe. Imaatinkooduna wuxuu sabab u noqday in tuulada saaxo ay dadkii shacabka ahaa ka qexeen oo ay noqoto meel gabaad u ah maleeshiyada dagaalka lagu jebiyey ee mahbarka.
Jidka Wadaagsin oo awalba beesha (Sacad) u ahaa kawaanka keliya ee ay dhebayacada ku qashaan, ayaa intii dagaalka Saaxo uu dhacay waxay noqotay wado xiran oo laga fiigay. Waxaa kaloo jirta in beesha dhebayaco oo ilaa iyo hada garan la meel loogayimid, in dhowaan miyiga dad reer miyi ah looga laayey. Beesha (Muumin Aadan) ayaa waxy u aragtaa hadii uu dagaal ka dhaco aaga saaxo in beesha Sacad ay si sahlan hubka uga furandoonto naagaha Habar-majeerteen.
Marka si aysan hubkaas uga qadin beesha (Muumin Aadan) ayaa waxay aaminsantahay in xasuuqa laguhayo mahbarka la dar-dar geliyo. Xoogaaga maxaysatada ah ee ay gunta Hagar-majeerteen geysey tuulada saaxo oo dhawaan dagaalka lagu jebiyey, Ninka beesha dhebayaco ay dagaalgelinta u xilsaartay oo fuleyga ah waxaa la yiraahdaa (Maxamed Yusuf Jaamac Tigey). Run ahaantiina waa nin dhaawac ah oo horay ay beesha MA u dhaawacday. Waxayna isku jifo yihiin ninka beesha reer (Maxamed Muumin) ay sida xun u dileen. Fursadda qaaliga ah ee ay rabto inay ka faa’iideysato beesha MA waxa weeye, tuulada Saaxo hada labo ciidan oo Sacad iyo Dhebayaco ah ayaa isku hor fadhiya. Maxaysatada dhebayacaduna hada waa ay xujeysanyihiin, oo sidii dagaalka loogu jebiyey inay xabad ridaan oo ay nimanka ku hareeraysan ay iska dul kiciyaan waa ay ku dhici la’yihiin. Garoowe na kuma ay noqonkaraan oo haday dhufeysyada ay ku jiraan ay ka baxaan waxay ka baqahayaan in la warjeefo. Hubka naagaha Habar-majeerteen ay ku xaragoonayaan markay ugu yaraato, cida MA-ku waxay rabilahaayeen inay 60% ay ka furtaan mahbarka. Intaysan beesha Sacad hubkaas wada calfan oo aysan ka wada furan.
Beesha (Muumin Aadan) ninka dhebayacada ah oo ay sida xun u dileen, waxaa uga daran Dhebayacada hanjabaada loogu hanjabey in mudo nusaac ka yar looga sifayn doono magaalada Gaalkacyo. Hanjabaad daas oo la filayo inay hurgumo ku noqondoonto inan gumeed (Maxamed Yusuf Jaamac Tigey) iyo beeshiisa oo ah dad mudo dheer xasuuq joogto ah lagu hayey.
8th January 2015, 9:39 am
8th January 2015, 9:40 am